White-breast Guinea Fowl: nkọwa, foto, ọdịnaya, nlekọta na nri - Ugbo ala ugbo - 2019
White-breast chick fowl: otú o si ele anya, otu esi elekọta na otu esi eri nri n'ụlọ
Umu anu anu ndi ozo bu otu n'ime ebe kachasi ewu nke ulo oru ugbo nke a. Guinea na-ekpuchi ihe ndị na-adịghị mma maka nlekọta, na-eguzogide ọrịa na inwe ọtụtụ uru karịa ọkụkọ: ntozu okè, anụ na-eru pasent 85% ma baa ọgaranya n'ime nsị anụ. Ndị na-azụ ihe na-arụ ọrụ mgbe nile iji melite àgwà na ịzụlite ụdị ọhụụ ọhụrụ.
Nkọwa na ọdịdị
Ngwa maka ụlọ
Ogige maka ije ije
Foto: ndi Zazzle di iche iche na-acha uhie uhie nke umu anu anu
Akụkọ nke si malite
White-breast Guinea Nyocha na Ụlọ Ahịa Na-ahụ Maka Ụlọ Ọkụ na 1970 kere Fowl na 1970. A na-ejikọta ìgwè ndị ahụ site na ịmịnye ọbara nke akpụkpọ anụ nke na-acha ọcha na Moscow ka ọkpụkpụ na-acha odo odo-speckled ọgazị anu. Ya mere, e guzobere eriri a na-acha ọcha n'elu igbe. Taa n'ime ìgwè ndị ahụ setịpụrụ usoro atọ dị iche iche na ngwaahịa dị iche iche.
Mpụga nke guine nnụnụ na-acha ọcha:
nnụnụ nke ọkara nha. Ogologo nke aru ahu ruru 1.5 m. Nnukwu aru nke ozo nwere ihe ndi mmadu choro, dika ndi na-acha uhie uhie. Akpa dị obere, dị ike, a dịghị atụcha ya. A naghị akpọ ọdụ ahụ. A na-emepụta ahụ ike nke ụmụ nwanyị. E gosipụtara nwoke ikiri obi;
nnukwu osisi. Agba ntụ na-acha ọcha na-acha ọcha na obi. Omume dị iche iche nke agba - site n'ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ruo ìhè na-acha acha odo odo;
isi dị obere, chọọ mma ọla ntị. Akpa na onu okuko na-ese odo. A na-agbanye olu ya na oke osisi.
Ọ dị mkpa! Ịgba nkịtị nke fowles fowls bụ ihe ịrịba ama nke ọrịa ahụ, n'ihi na ọbụnadị na ọnọdụ dị jụụ na n'abalị, nnụnụ na-eme ka ntụrụndụ na ụda ndị ọzọ dị.
Ụdị arụpụta ọrụ:
arọ nke ụmụ nwoke bụ 1.6-1.75 n'arọ, na ibu nke nwanyị bụ 1.9-2.1 n'arọ;
anụ ọka ruru 85% site na anụ ahụ;
akwa mmepụta - 135-140 àkwá kwa afọ;
akwa arọ - 44-46 g;
agba agba - si na-acha odo odo na agba aja aja;
akwa ọmụmụ - 91-94%;
hatchability nke àkwá - 72%;
Ọnụ ọgụgụ dị ndụ nke ụmụaka na-eto eto - 98%.
Guinea nnụnụ nwere ike ibi ndụ n'ọnọdụ ọ bụla - ha na-agbanye mgbọrọgwụ n'ụzọ dị mfe, ha nwere ike iri nri ọ bụla, ha enweghịkwa ike ịchịkwa ya. Ma ọ bụrụ na ịgha mkpụrụ nwere nzube na-arụpụta, mgbe ahụ, ị ​​ghaghị ịnọ na ya ụfọdụ chọrọ maka ọnọdụ ejidere.
Nnụnụ chọrọ 1 nwoke maka 5-6 nwanyị - nke a ga-enye akwa pasent akwa akwa njikọta. Ọ dị mkpa icheta na n'ọhịa, ụmụ nwoke na-ahọrọ nke ọma, na ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị inyom ga-ebelata ohere nke njikọta njikọta ha.
Ọ bụrụ na ụmụ nnụnụ adịghị ebikọta ọnụ, mgbe ahụ, a ga-edebe ndị nnọchiteanya nke ụdị dị iche iche, n'ihi na ha ga-esemokwu maka ókèala, ihe oriri, wdg.
Nnụnụ chọrọ ụlọ na ije. Na-eje ije, anụ ufe anaghị agbaji ala, nke dị mfe maka akwa. Karịsịa nke ọma ha na-arụ ọrụ na akwa nduku, na-achịkọta Colorado.
Ọ dị mkpa! Ejila akwa akwa akwa na akwa akwa: ebe resins dị na ha nwere ike ịrapara na osisi ahụ.
Ka nnụnụ na-ahụ ike, ọ dị mkpa iji kwadebe ụlọ ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Lekwasị anya na ndụmọdụ dị otú ahụ:
Guinea na-ekpo ọkụ na-eguzogide ọgwụ na-adịghị ala, mana ọ na-adọrọ mmasị na ya. Ya mere, isi ihe achọrọ maka ụlọ ahụ bụ enweghị ọdịiche. Ebe ọ bụ na nnụnụ dị oke buru ibu, mgbe ọ dịkarịa ala otu onye kwesịrị inye ọ dịkarịa ala mita 500. m square. Ụlọ ọkụ a na-ekpo ọkụ ga-abụ ihe na-enweghị ike ịgafe maka nnụnụ n'oge oyi.
N'ime ụlọ ahụ aghaghị ịbụ perches: oghere nke - 4x5 cm, anya n'etiti perches - 30-40 cm, elu nhazi - 40 cm si n'ala. Size nests - ọ bụghị ihe na-erughị 40x30x30 cm. Ihe okike nke ọtụtụ nests, mana nest ga-abụ ezigbo.
E kpuchiri ala mbadamba site na shavings, hay, ájá na ahihia. Okpokoro okpokoro - 20 cm. A na-agbanwe ihe ndinaba ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa.
N'oge oyi, ha ga-achọ ìhè na-emepụta ihe iji nọgide na-emepụta mmepụta. Ọ bụ ihe na-achọsi ike ịgbatị awa anyanwụ ruo awa 12-14 kwa ụbọchị. Ihe kacha mma ikuku okpomọkụ maka guine fowls bụ + 10 ... +15 Celsius C.
N'ime ụlọ ga-adị windoweche ihu na ndịda. Maka ezigbo umu nnunu ndi kwesiri ntukwasi-obi ka ha kwesiri ijiri.
Nri anụ ụlọ kwesịrị ịdị 3-4 ugboro n'ụbọchị. Ya mere, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eri nri kwesịrị ịbụ ma ọ dịkarịa ala 1 n'ime mmadụ 5. Ọ bụrụ na ndị na-azụ anụ na-etolite n'ọgba, mgbe ahụ, onye ọ bụla n'ime ha ga-enwe nri na ịṅụ mmanya.
A na-eme disinfection nke ụlọ dị ka atụmatụ ndị a:
ịsacha na nhazi nke ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na ndị na-eri nri - kwa izu;
ulo mkpofu ulo ulo anu ulo - otu ugbo n'ọnwa.
Ị ma? Ọ bụrụ na ụmụ ahụhụ na-eri anụ na-ahụkarị na mpaghara ahụ, ndị ọrụ ubi na-eri nri ụmụ ahụhụ na-eri ọtụtụ n'ime ụmụ ahụhụ ndị a kwa ụbọchị. N'ịmara ụdị ụtọ ha na ọdịdị ha, nnụnụ n'onwe ya ga-achọta ha. Ụzọ a iji chebe akwa ahụ ga-enye ezigbo ihe ọkụkụ.
Ejiri ụkwụ na-aga ije kwesịrị ịgba ọkụ, n'ihi na nnụnụ ahụ nwere mmasị na anyanwụ. Ebe ahụ kwesịrị ịbụ osisi ma ọ bụ ogologo ahịhịa - n'ime ọhịa, ha na-ebi na obere undergrowths na osisi. N'oge oyi, a na-awụnye mpe akwa ahụ na peat, nke ga-egbochi nchịkọta ice, na ahịhịa, nke mere na ọ bụghị na nnụnụ ka a na-esi na nkwonkwo. N'oge ọkọchị, nnụnụ a na-aṅụ na-enwe ike inweta 70% nke ntutu maka ije. Ọ dị mkpa ka ụmụ nnụnụ nweta mmiri ọṅụṅụ dị ọcha. Ọ bụrụ na ịga ije bụ ebe a na-emeghị ihe ọ bụla a na-eme, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eje ije, ọ ga - agafe ihe dị ka kilomita 3, ma ha ka na - alaghachi n'ụlọ maka abalị ahụ.
Mụtakwuo maka ntinye oyi nke ndị na-azụ anụ.
Ihe nchịkọta nke ndị na-anụ ọkụkọ yiri nke broiler ration na nwere:
elu - dị ọhụrụ ma n'ụdị nri ahịhịa n'oge oyi;
anụ anụmanụ - anụ na ọkpụkpụ nri, ngwaahịa mmiri ara ehi.
Site na ọka na-ahọrọ wheat na oka. Nnụnụ na-ahọrọ na-eri nri, ihe ha na-adịghị amasị, ga-anọgide na feeders na a ga-eri ikpeazụ. Akụkụ a na-enyere onye ọrụ ugbo aka ịgbanwe nri anụ ahụ.
Ị ma? Aha sayensi nke guine fowl bụ Numida meleagris. Otu akụkọ Grik na-akọwa na ndị na-azụ anụ bụ ụmụnne Tsarevich Meleager. Umu ocha di n'ime ubochi anya bu ndi anya eze ndi nwuru anwu.
Onu ogugu nri na nri:
ọka - 50%;
Akwụkwọ nri na elu - 45%;
Ngwakwunye mineral - 5%.
Nri ụtụtụ kwa ụbọchị abụghị ihe na-erughị 200-250 g, nke elu adịghị elu karịa 120 g. Nye obere akụkụ 1-2 ugboro n'ụbọchị. Ihe nchịkọta isi bụ isi bụ shells, chalk, salt. Na mmiri dị iche iche kwesịrị ịdị na-abụ gravel ma ọ bụ na-agbaji ghaa.
Uru nke Zagorsk dị ọcha na-acha ọcha:
egosi ihe dị elu: Ihe a na-enye onye ọrụ ugbo na àkwá buru ibu n'afọ nile;
uru ngwa ngwa - ruo ụbọchị 70, ịdị arọ ruru 1 n'arọ;
nnukwu ihe ngosi nke aku na uba: ugwo ugwo ato n'arọ nke nri kwa 1 n'arọ nke abawanye uba;
nnukwu pasent nke àkwá na-asọ oyi;
adịkarịghị na-arịa ọrịa, ọ naghị enwekwa ike ibute ọrịa "ọkụkọ";
anabata obere okpomọkụ dị mma;
Chọpụta ụdị na ụdị ụmụ nnụnụ.
nwere ike buru ebe ọ bụla;
enweghi ike ikwusi ike na egwu.
Zagorsky acha ọcha bụ ọkacha mmasị m anụ fowls. N'afọ a, a na-edochi hens maka m, ka ha na-agba ọsọ site na mmiri ruo October kwa ụbọchị n'enweghị nsogbu. Azụ ahụ bụ nke abụọ na-amasị ya, mgbe quail gasịrị, ọ na-echekwa ya ruo ogologo oge, ọ na-esikwa ike ịkụ aka.
N'ezie, enwere oge kachasị mma n'ịzụ anụ ọkụkọ karịa ndị na-adịghị mma, otú ahụ ka ịzụ ụmụ nnụnụ dị ndụ pụrụ ịbụ ọrụ bara uru. Nlekọta na ndozi kwesịrị ekwesị ga-enye onye ọrụ ugbo ahụ nri na-edozi ahụ na anụ ahụ dị mma.
Osisi nke ugu ezinụlọ nke Grik kukumba, ma ọ bụ ihe bụ egusi
Ihe na-enye aka na otu esi azụlite methylene acha anụnụ anụnụ maka ọkụkọ
Kedu ka ị ga-esi akpọ nwa ehi: aha nickname maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ White-breast chick fowl: otú o si ele anya, otu esi elekọta na otu esi eri nri n'ụlọ